China True Wireless Earbuds ane Hollow Metallic Chaja Case, Low Latency Manufacture and Factory |Roman
Chokwadi Wireless Earbuds ane Hollow Metallic Kuchaja Case, Yakaderera Latency
Chipset:Pixart PAU1803 V5.1/Chipset:BT8896A V5.0
Nguva yeMumhanzi: 3H
Nguva Yekutaura: 2H
Nguva yekumira: 80H
Headset bhatiri: 33mAh*2
Kuchaja base bhatiri: 300mAh
Ultra-Mutete & Stylish & Aluminium Alloy Hollow Dhizaini.
Bluetooth V5.1, Inokurumidza Kutapurirana Uye Yakaderera Simba Kushandisa.
Yakachena Treble & Yakasimba Bass: Kubva pakakwirira treble kusvika pakadzika bass, PEK & PU Dual Diaphragm inoburitsa yakachena, inonzwisisika inonzwika ruzha.Imwe-nhanho pairing iwe uchave uri euphonic mimhanzi yenyika mumasekonzi mashoma.
Hollow Metallic Charging Case: Iyo 18mm yekupedzisira-mutete muviri wakagadzirwa nepremium lightweight yealuminium alloy, uye hollow dhizaini yekuchaja compartment inoita kuti izvi zvizivikanwe.
Chizvarwa chinotevera chakaderera-latency chip chinoburitsa iyo inokurumidza mutambo wekutamba-rience, iyo latency mumutambo weodhiyo modhi yakadzikira se65ms, uye kunonoka maikorofoni kwakadzikira se38ms, zvichikuunzira ruzivo rutsva rwemitambo, Batidza/dzima. yakaderera kunonoka modhi: bata yekuruboshwe headset 3 Nguva nguva dzose.
18mm yekupedzisira-yakatetepa hollow yekuchaja bhokisi yakareruka zvakanyanya, iri musanganiswa wakakwana wehuremu huremu uye kutaridzika kweramangwana, (Dimensions:57.5mm x 46mm x 18mm).
Imwe-Finger Kubata Kudzora Kurerutsa Mashandiro.
300mAh Kuchaja Bhokisi Inokutendera kuti unakirwe nemimhanzi kana kufona kwenguva refu.
1.Vhura chivharo chebhokisi rekuchaja, uye musoro wepamusoro unobva waiswa simba uye unopinda pairing mode, nezwi rinokurumidza.
2. Batidza Bluetooth yefoni uye tsvaga Bluetooth headset zvishandiso.Mushure mekutsvaga Bluetooth headset, tinya Pair kuti upedze kubatana.
3.Kuridza mimhanzi / kumbomira: Kana mimhanzi ichiridzwa, unogona kudzvanya kaviri munzeve wekuruboshwe (L) kana runhare rwekurudyi (R) kuti umbomira mimhanzi, kana kudzokorora chiito chimwe chete kuti utange kuridza mimhanzi zvakare.
4.Previous Track: Kureba bata runhare rwekuruboshwe (L) kwemasekonzi matatu.
5. Inotevera Track: Kureba bata earphone yekurudyi (R) kwemasekonzi matatu.
6.Game mode: Bata iyo headset katatu kuvhura iyo yakaderera-latency mode, ichiperekedzwa ne "beep-beep" toni, dzokorora oparesheni kudzima yakaderera-latency mode, ichiperekedzwa ne "beep-beep-beep". "inzwi.
Zvakapfuura: Wireless Earbuds Bluetooth 5.0 Mahedhifoni, mu-Nzeve Nzeve
Zvinotevera: Chokwadi Wireless Active Noise Kudzima Earbuds
Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Bluetooth Mono Headset, Bluetooth Headset Ine Mic, Munzeve Earphone, Wireless Bluetooth Earphone, Noise Kanzura Earbuds,